Izindaba - Yini ikaraoke？
Isidlali se-karaoke sonke
Igama le-karaoke lisuselwa emagameni aseJapan athi "ize" kanye "ne-orchestra". Ngokuya ngomongo, i-karaoke ingasho uhlobo lendawo yokuzijabulisa, ukuculela emuva, nedivayisi yokukhiqiza emuva emuva. Akunandaba umongo, sihlala sithwebula imakrofoni, ukukhanya okukhanyayo kwesikrini nge-subs, nomoya wokujabula. Ngakho-ke, iyini ikaraoke?
Akunampendulo ethize embuzweni wokuthi i-karaoke ivele nini okokuqala. Uma sikhuluma ngokucula kumculo ongenazo izingoma, khona-ke ekuqaleni kwawo-1930, kwakukhona amarekhodi e-vinyl anezingoma ezingemuva, enzelwe ukusebenza kwasekhaya. Uma sikhuluma ngomdlali we-karaoke, uhlobo lwayo lwaklanywa okokuqala eJapan ekuqaleni kwawo-1970 ngokuthinta umlingo komculi uDaisuke Inoue, owasebenzisa izingqungqulu emuva ngesikhathi sokudlala kwakhe ukuphumula ngokushesha ngenkathi egcina izinga lokuhlwithwa kwezethameli.
AmaJapane akuthanda kakhulu ukuculela izingoma ezingemuva okwathi kungekudala, kwavela imboni entsha yokukhiqiza imishini ye-karaoke yamabha namaqembu. Ekuqaleni kwawo-1980, i-karaoke yawela ulwandle yafika e-USA. Okokuqala, yanikezwa ihlombe elibandayo, kepha ngemuva kokusungulwa kwabadlali be-karaoke abasekhaya, yaduma kakhulu. I-athikili ethi "Karaoke Evolution" izokunikeza imininingwane eyengeziwe ngomlando we-karaoke.
Izwi lomculi lihamba ngemakrofoni laya ebhodini lokuxuba, lapho laxuba khona lafaka emuva. Ngemuva kwalokho, yadluliselwa kanye nomculo kohlelo lwangaphandle lomsindo. Abaculi bebefunda izesekeli kumabonakude. Ngemuva, kudlalwe ividiyo yangempela yomculo noma imifanekiso ekhiqizwe ngokukhethekile enokuqukethwe okungathathi hlangothi.
Isibonisi se-Miracast, I-Karaoke yeMakrofoni engenantambo, I-Karaoke Microphone Ephathekayo, Cula isidlali seMagic Karaoke,